INQAKU LENYANISO: ITHA YOQINISEKISO LWEALBHAMU - IINDABA
I-Trae Tha Inyaniso lelinye lawona mazwi ahlukileyo kwi-rap yaseHouston, nokuba akaze aqhekeze ukuya kuthi ga kwinqanaba labo beklasi-ka-2005. I-albhamu yakhe yamva nje inezinto uJ. Cole, uDej Loaf, uKamva, nabanye.
Kukho ukuqhuma kwilizwi elikhulu le-rap eHouston — iBaritone kaBun B, i-Z-Ro's bluesy bounce, ibhoso likaScarface. Kodwa i-Trae tha Truth's inokuba yeyona ikhetheke kakhulu-i-rasp ethwele ubunzima kakhulu ingangumba ka-Big Rube wase-Houston, ukuba i-Rube igqibe kwelokuba isingqisho. Akazange aqhekeze ngokwenene yonke indlela njengabantu bexesha lakhe ukusuka kwiklasi ka-2005, okanye aphunyuke kwi-hub yendawo ye-Screwed Up Click. Kukho ubumnyama kumculo wakhe onokuthi ukhuphe abantu bangaphandle. Ngamanye amaxesha ude angaphazamisi isixeko sakhe: Wayevinjelwe isikhululo se-hip-hop esaziwa kakhulu eHouston ixesha elininzi ngenxa yesityholo sokuba wayexhokonxa ubundlobongela ngoSuku lweTrae yakhe yonyaka, iholide yasekhaya, yesisa (eyamkelwa ngokusemthethweni Usodolophu!). Ngamanye amagama, ubugcisa bakhe bubuchanekile kwinqanaba lokuphantse bamdwelise kwisixeko asimele ngokungakhathali ngaphezulu kweshumi leminyaka. Akukho mntu umthengisi ngaphandle kukaTrae.
Nangona kunjalo, kuyinyani kwifom yaseHouston, akanakukwazi ukugcina i-albhamu epheleleyo. Phakathi kokubaleka wedwa kunye nomsebenzi wakhe no-ABN, uTrae wamisela uluhlu lwee-canon, kodwa uya kuba nzima ukuva ingoma yakhe emva kukaFat Pat's 'Tops Drop' kunye noChamillionaire 'Ridin' ngexesha le-Houston uluhlu lokudlala: usebenze kakhulu kangangokuba kule minyaka idlulileyo usasaze ikhathalogu yakhe ibhityile. Ukungabikho kobukho obuqinileyo baseHouston kwiTha Inyaniso, irekhodi lokuqala likaTrae kwisithuba seminyaka emine, ayothusi, kuba uhlala engumnqakathi wabantu abaziwayo kwilizwe laseHouston, kunye nokunxulumana kwakhe ne-TI's Hustle Gang bambi bendawo bayabhabha. Kodwa ngelishwa ibolekisa iilebhile enkulu ye-rap efanayo Inyaniso yeTha , icwecwe lakhe lesixhenxe lealbhamu esemthethweni, leyo kryptonite kumntu owahlukileyo njengoTrae.
Amanye amaxesha asebenza ngcono kunamanye, kodwa ialbham iziva ishukuxekile kunokuba ilandelelaniswe. Ingxaki, umlobi olungileyo, akahambelani kakuhle noLil Boss, enye yeempawu ezimbalwa (kwaye inye kuphela yendawo) ukushiya uphawu, kwisibini sokuqala esiqinileyo 'Ewe Hoe.' UTrae uvumela uDeJ Isonka ukuba afumane igama lokugqibela kule rekhodi, ngokusondeleyo 'kwiReigigion,' kwaye okufanelekileyo kuyavakala: UDeJ usebenza ngendlela efanayo yokulwa nentlalontle uTrae ayirhweba ngayo iminyaka. Ngokumangalisayo, intsebenziswano kaJ. Cole yeyona ngoma ichaphazelayo. Cole's gravitas strained isebenza ngeedosi ezincinci, kwaye iyasebenza 'kuBantwana baMadoda,' isililo somphefumlo esihamba kwimixholo eqhelekileyo yobundlobongela nentlupheko kodwa sikwazi ukubaphazamisa ngokutsha kubukho bukaTrae.
Xa ungangxoli kwiindawo eziphakamileyo 'zaBantwana baMadoda' okanye ukuthotywa kwejamu yesini engacetyiswanga gwenxa 'yeLate Night King' (eneJeremih ene-Auto-Tuned kakubi kwi-hook), i-Tha Inyaniso ihamba nje kwi-rap yase-Houston phakathi. Kwisingeniso, uLil Duval unyanzelisa, 'akukho mculo apha kumzabalazo ngoku ... nantso into efunwa ngabantu.' Kwaye uTrae uhlala enyanisile kwilizwi lakhe. 'Kutheni' isibonakaliso esibuhlungu sobundlobongela bemigulukudu, kodwa asihambi emva kokuba siphelile. 'Yenzakalisa yonke imoto endiyifumanayo' kunye neKamva kunye neBoosie, ilungile, kodwa ichaza indlela uBoosie alambe ngayo: 'Tshiza into yeelekese kodwa ungaphazamisa isabhokhwe ngosuku olulandelayo / ibhotolo yamandongomane igutyungelwe ngeplastikhi / istash amabala kuyo yonke indawo, ukukhwela kubhabha yonke indawo. ' Le yimigca eyonwabisayo enamathela entlokweni yakho ekumameleni kokuqala, kwaye bathimba amandla ngakumbi kwimizuzwana embalwa kunokuba iTrae yenzela irekhodi lonke.
Ukubonisa akukaze kube luphawu lokuthengisa lukaTrae, kwaye oko kunokuba ngumcimbi. Usadlwengula ngokwaneleyo ngaphezulu kokubetha okuhle, kwaye ufumana amanqaku ngokungahambisi izihlangu kwiKirko Bangz hook okanye kwivesi kaTravis Scott kwenye indawo. Ukanti u-Tha Inyaniso akaziva ebalulekile, kwaye, encotsheni yakhe, u-Trae wayengoyena mrepha ubalulekileyo wase-Houston-ebambelela kwindawo ebonakalisa u-Mike Jones kunye no-Paul Wall, wayengumbhali weengoma, isazela sabaphantsi komhlaba. Umkhondo akufuneki ubonakalise nakubani na ukuba ulilizwi elifunekayo kwi-hip-hop, kodwa phakathi kwewele likaSlim Thug Ubomi beHogg Iirekhodi zalo nyaka, okanye iziphumo ezingaguqukiyo ezivela kwilungu elinye le-ABN uZ-Ro, okwangoku uphumile.
Beyonce uyilo lokhenketho lwehlabathi
I-albhamu entsha yodumo 2020
ukulinda icwecwe elitsha
iipaki kunye nomhlaba rec ho